Oggolaanshaha Hore ee FAQ - Caymiska Caafimaadka Maxalliga ah ee Gobolka Washington - CHPW
Bogga ugu weyn > Xarunta Bixiyaha > Ogolaansho hore > Oggolaanshaha Hore ee Su'aalaha
Su'aalaha inta badan la isweydiiyo ee ku saabsan siyaasadaha iyo nidaamkayagii hore ee oggolaanshaha, ayaa laga jawaabay.
Dhagsii su'aalaha guud ee hoose si aad wax badan uga ogaato Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington (CHPW) siyaasadaha iyo nidaamyada oggolaanshaha hore.
Su'aalaha guud ee ku saabsan oggolaanshaha hore
Waa maxay oggolaansho hore?
Oggolaanshaha hore waa oggolaanshaha horumarsan ee nidaamyada gaarka ah, adeegyada, aaladaha caafimaadka, sahayda, iyo daawooyinka ee ay bixiso CHPW. Oggolaanshaha hore dib u eegis waa habka lagu go'aaminayo baahida caafimaad ee adeegyada la sheegay, sida ku cad tilmaamaha daryeelka caafimaad iyo shuruudaha maaraynta isticmaalka.
Oggolaansho hore ayaa looga baahan yahay dhammaan oggolaanshaha bukaan-jiifka jadwalka ku jira, iyo sidoo kale adeegyada cayiman ee cayiman, dawooyinka caafimaadka, qalliinka, ogaanshaha, daaweynta, iyo hababka sawir qaadista.
Maxay CHPW ugu baahan tahay oggolaansho hore?
Nidaamka oggolaanshaha hore wuxuu siinayaa CHPW fursad ay dib ugu eegaan sida loogu baahan yahay adeegyada qaarkood ama daawooyinka ay ugu jiri karaan daaweynta xaaladaha caafimaad. Tusaale ahaan, qaar ka mid ah daawooyinka magaca magacyadu aad ayey qaali u yihiin. Inta lagu jiro dib-u-eegista, CHPW waxay go'aansan kartaa nooc guud ama beddelaad kale oo qiimo jaban si siman ugu shaqeyn kara daaweynta xaalad caafimaad.
Oggolaanshaha hore wuxuu xaddidayaa helitaanka adeegyo iyo daaweyn qaali ah - gaar ahaan daaweyn cusub. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu go'aamiyo baahida caafimaad iyo ku habboonaanta daryeelka.
Sideen ku heli karaa oggolaansho hore?
Bixiyeyaashu waa inay ku soo gudbiyaan oggolaansho hore boggayaga maareynta daryeelka, JIVA.
Waxaad sidoo kale fakis ugu diri kartaa codsiyo oggolaansho hore 206-652-7065. Fadlan hubi lambarka fakiska ee ku yaal xagga sare foom kasta maxaa yeelay way ku kala duwanaan karaan iyadoo ku xiran codsiga. Ka hel foomamka oggolaanshaha hore ee CHPW halkan.
Farmashiyaha, bixiyeyaashu waa inay ku soo gudbiyaan codsiyada iyagoo adeegsanaya ExpressScripts oo loogu talagalay oggolaansho hore, tillaabo tallaabo, qaab-aan-caadi ahayn, ama xad-dhaaf xadidan. Ugu wac iyaga 1-800-753-2851 inaad la hadasho takhasusle aqoonsi hore. Daawooyinka si xirfad leh loo maamulo raac tilmaamaha halkan.
Dhammaan codsiyada kale ee oggolaanshaha hore waxaa qaban doona shaqaalaha CHPW. Fadlan la xiriir wakiilkaaga xiriirka bixiyaha wixii macluumaad dheeraad ah.
Ma loo baahan yahay oggolaansho hore oo loogu talagalay adeegyada gurmadka?
Looma baahna gudbin ama oggolaansho daaweynta qolka gurmadka.
Maxaa dhacaya haddii oggolaanshahaygii hore la diido?
Haddii CHPW diido codsigaaga inaad maamusho adeegyada qaarkood, daaweynta, qalabka, ama dawooyinka dhakhtarku qoro, xubintu way ka dacwoon kartaa go'aanka waana inay raacdaa hab maamuuska Bogga Cabashooyinka iyo Racfaanada.
Haddii daroogada loo diido Qoraallada Degdegga ah, bixiyeyaasha ayaa rafcaan ka qaadan kara go'aanka iyagoo u diraya warqad iyo dukumiinti caafimaad, oo ay ku jiraan taariikhda iyo sababta diidmada ee ay bixisay ESI, si:
Attn: CHPW Apple Health Racfaanada
Rafcaanka degdega ah waxaa loogu talagalay xaaladaha degdega ah oo keliya; wac 1-800-440-1561.
Mudo intee le'eg ayay qaadanaysaa in la helo oggolaansho hore?
CHPW waxay ku dadaalaysaa inay ka baaraandegto codsi oggolaansho gudaha Gobolka Washington iyo heshiiska qandaraaska
shuruudaha waqtiga, iyo iyadoo la raacayo baahiyaha daryeelka caafimaad ee xubintayada. Wakhtiga
kordhinta mugga codsiyada waxay saameyn ku yeelan kartaa waqtiyada wareejinta. CHPW waxay ku dadaashaa inay u hogaansanto
soo socda jadwalka shaqada:
Codsiyada oggolaanshaha hore ee caadiga ah waxaa lagu shaqeynayaa 5 illaa 14 maalmood gudahood.
Codsiyada deg-degga ah ee degdegga ah waxaa looga baaraandegaa 2 illaa 5 maalmood gudahood.
Waraaqo noocee ah ayaan ubaahanahay inaan kubixiyo codsigeyga?
Dukumeentiga lagu taageerayo baahida caafimaad waa in lagu soo gudbiyaa codsi oggolaansho hore. Macluumaadkani wuxuu taageeraa baahida daaweynta iyo soo gudbinta macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan soo gudbinta bilowga ah waxay gacan ka geysaneysaa in la hubiyo in codsiga si habsami leh looga hawlgeli karo waqti ku habboon.
Tusaalooyinka dukumintiyada habboon waxaa ka mid ah:
Taariikhda hadda jirta iyo / ama baaritaanka takhtarka ee xallinaya dhibaatada iyo baahida loo qabo adeegyada la codsaday
Natiijooyinka shaybaarka khuseeya iyo / ama shucaaca
Qoraallada la-tashiga takhasuska leh ee khuseeya
Macluumaadka kale ee muhiimka ah ee gacan ka geysanaya geedi socodka go'aan qaadashada
Shaqaalaha Maareynta Ka-faa'iideysiga CHPW waxay codsan karaan macluumaad daaweyn gaar ah oo dheeri ah oo loo maro fakis ama telephon ahaan si loo dhammaystiro hawsha oggolaanshaha.
Haddii aad weli su'aalo qabto, wac Adeegga Macaamiisha si aad u hesho caawimaad. Wakiiladeena waxaa laga heli karaa 1-800-440-1561 (TTY Relay: Garaac 711) Isniinta ilaa Jimcaha, 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo
Taariikhda Ugu Dambeysa ee Cusboonaysiinta: Janaayo 20, 2022